Real Madrid oo Taako loo dhigay, Liverpool iyo Man City oo guulo gaaray & guud ahaan natoojooyinka kulamadii caawa laga ciyaaray Champions League… + SAWIRRO – Gool FM
(Yurub) 28 Okt 2020. Waxaa caawa la ciyaaray kulamo aad u xiiso badan ee ka tirsan kulamada labaad wareega Group-yada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan 2020/21.
Kooxaha Real Madrid, Manchester City, Liverpool, iyo Inter Milan, ayaa ka mid ahaa kooxihii ugu muhiimsanaa ee caawa ciyaaray kulammadii koobka horyaallada Yurub ee Champions League.
Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa kaga soo adkaatay 1-2 kooxda Lokomotiv Moscow, iyaddo ay goolasha kaga mahad celineyso xiddigaha Leon Goretzka iyo Joshua Kimmich.
Dhinaca kale Liverpool ayaa guul dirqi ah kaga gaartay 2-0 kooxda FC Midtjylland oo marti u aheyd, iyadoo ay goolasha u kala dhaliyeen xiddigaha kala ah Diogo Jota iyo Mohamed Salah
Sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa kabadbaaday guuldarro kulankeedii labaad xiriir ah wareega Group-yada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan, kaddib markii ay ku kala baxen naadiga Borussia Moenchengladbach barbardhac 2-2 ah, waxaana goolasha u kala dhaliyay Los Blancos Karim Benzema iyo Casemiro.
Manchester City ayaa dhinaceeda guul ka soo heshay kooxda reer France ee Marseille, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-3, waxaana goolasha u dhaliyay kooxda reer England xiddigaheeda Ferran Torres, Ilkay Guendogan iyo Raheem Sterling.
Borussia Moenchengladbach 2 – 2 Real Madrid
Marseille 0 –3 Manchester City
Liverpool 2 – 0 FC Midtjylland.
Horudhac: Juventus vs Barcelona, Pirlo vs Koeman... (Shaxda macquulka ah & Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya Turin)